महिलाले खोज्ने यी १० कार्य थाहा छैन भने बुझ्नुस् सम्बन्ध धेरै टिक्दैन - Filmy Hotline
काठमाडौं । धेरैलाई लाग्न सक्छ कि केटीहरुले केटाको जस्तो यौनको बारेमा कल्पना गर्दैनन् । यदी त्यसो हो भने, तपाईं गलत हुनुहुन्छ । एक अध्ययनले हरेक स्त्रीले आफ्नो जीवनमा केही न केही फरक र उत्ताउलो खालको यौन अनुभव गर्न चाहन्छन् । र मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठा अनौठा यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउँछन् । केटीहरुले यौनको बारेमा कस्ता कस्ता कुरा सोंच्छन् ?
अपरिचितसँग सेक्सः अधिकाँश महिलालाई अपरिचित पुरुषले छुँदा नराम्रो लाग्छ । तर कतिपय समयमा अपरिचित पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्ने विषयमा महिलाहरु उत्तेजित हुन्छन् । अध्ययन भन्छ कि अपिरिचितसँग यौन सम्बन्ध राख्दा सबै सीमा भुलेर रमाइलो गर्न पाइन्छ भन्ने उनीहरुको सोंचाई हन्छ ।
आत्मसमर्पणः अधिकांश महिलालाई अपेक्षा हुन्छ कि कुनै पनि पुरुषले उनीसँग मालिक जस्तो ब्यवहार गरोस् । उठाएर ओच्छ्यानमा राखोस् र कपडा खोलेर क्रिडा गरोस् । अलि हेप्ने र होंच्याए जस्तो गर्ने पुरुषसँग सेक्सका लागि महिला लालायित हुन्छन् ।
महिला महिला सेक्सः महिला पुरुषसँग मात्र होइन कतिपय महिलासँग पनि आकर्षित हुन्छन् । महिला महिलाबीच आपसी यौन सन्तुष्टि दिने ब्यवहारबारे पनि महिलाहरुले सोच्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
चरम सन्तुष्टिको चाहनाः महिलाहरु हरेकपटक चरम सन्तुष्टिको यौन सम्बन्धबारे सोंच्छन् । तर सँधै यस्तो वास्तविक जीवनमा भने नहुन पनि सक्छ ।
नदी वा समुन्द्री किनारः अधिकांश महिलाहरुलाई नदी वा समुन्द्र किनारमा यौन सम्बन्ध राख्ने चाहना हुने अध्ययनले देखाएको छ । आफूलाई मन पर्ने पुरुषसँग यस्तो स्थानमा एक्लै हुन पाइयोस् भन्ने उनीहरु सोंच्छन् ।
निर्वस्त्र हुने चाहनाः महिलाहरु पुरुषको अगाडि कपडा खोल्न लाज मान्छन् । तर उनको चाहना पार्टनरले कपडा खोलिदियोस् भन्ने हुन्छ । हिल चप्पल लगाएको बेला होस या सेक्सी लञ्जरी महिलाहरुलाई यस्तो चाहना बढी हुन्छ ।
सभ्य बलात्कारः कुनै पनि महिलालाई बलात्कृत हुने चाहना हुँदैन । तर कुनै पनि मन परेको पुरुषले जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध राखोस् भन्ने चाहना चाहिँ उनीहरुमा हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
भूमिका परिवर्तनः महिलाहरु सामान्यतः निष्क्रिय हुन्छन् । तर कहिलेकाहिँ महिलालाई पुरुष जस्तै सक्रिय भएर यौन क्रिडामा सहभागी हुन मन लाग्छ ।
बाथरुम मस्तीः कुनै पनि महिलालाई बाथरुममा यौन सम्बन्ध राख्ने भित्री चाहना सधैं हुने अध्ययनको भनाइ छ । सावरको मुनी बढी उत्तेजित अनुभव गर्छन् महिलाहरु ।
एक रातः दुनियाँले जेसुकै वा सोंचोस् आफूले मन पराएको पुरुषसँग एक रात मनाउने चाहना हरेक स्त्रीमा हुन्छ । पहिलो यौन सम्बन्धबारे उनीहरु सँधै सोंचिरहन्छन् । एजेन्सी
Prevमासुबाट भन्दा दोब्बर हैन तेब्बर प्रोटिन यी फुडबाट : अति स्वस्थकर [सक्दो सेयर गरौ]
Nextविश्व विजेता अमेरिकन खेलाडीले सन्यास लिएर हिन्दु धर्मको प्रचारक बनेपछि अमेरिका बन्यो हैरान
बुधबार जन्मिएको मानिसको भविष्य र आचरण कस्तो हुन्छ ? (पत्ता लगाउनुस् आफ्नो भविष्य)
मंगलबार यसरी गर्नुहोस हनुमानजीको पुजा तपाइको मनोकामना पुरा हुनेछ
नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा जारी आजको बिनिमय दर एस प्रकार रहेको छ | अवस्य हेर्नुहोस कुना देशको कती ?
उहाँले त देवालीमा घर आउँछु भन्नुभएको थियो तर लेखकुमारीको सपना पनि बालुवाको घर झैं गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो